တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အေ ဘီ စီ ဒီ မတတ်ဘဲနဲ့ ...
Posted by မေဓာဝီ at 11:28 AM
မမေရေ... စုချစ်လည်းအဲသလို ဘေးနားက ပြောပြမဲ့ ဦးလေးမျိုးရှိချင်လှပါ့.... အားကျမိပါတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း မမေပြောသလိုအဆင့်ပဲရှိနေသေးတာ သိနေပေမဲ့ တိုးတက်အောင်ဘာမှ မလုပ်ပဲနေတာဆိုးလှပါတယ်....
7/15/2009 2:59 PM
အမရေ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမှာပါ။ ကြိုးစားနေတာပဲဟာ။ ကိုယ်လည်းထူးမခြားနားအဆင့်လေ။ :P
ဟား... အဖော်တွေ ရှိတယ်လို့သာ မှတ်လိုက်ပေတော့။ ကျနော်ဆိုရင် ဒီရောက်ကာစက စင်္ကာပူလူမျိုးတွေရဲ့ ဒေသခံအင်္ဂလိပ်စကား (Singlish) ကို တဖက်သတ် ကျိတ်ပြီး အထင်သေးထားတော့ ကိုယ်ပြောတာ သူတို့နားမလည်ရင် သူတို့ညံ့လို့ပဲလို့ ထင်ထားတာ။ ဒီကောင်တွေ အင်္ဂလိပ်စာကို နေ့စဉ်သုံးလုပ်နေပြီး ညံ့လှချေလားပေါ့။ နောက်မှ ဘယ်ဟုတ်လို့တုန်း။ ကိုယ့်အသံထွက်တွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက အမှားတွေ ဖြစ်နေတာကို သိပ်မကြာခင်ကမှ သဘောပေါက်သွားတယ်။
7/15/2009 4:42 PM
ပညာရေးစနစ် အတူအတူအောက်က ထွက်လာကြတာ သူမသာကိုယ်မသာပါပဲ အမရေ...
ဒီမှာတော့ နေထိုင်ပြောဆိုလို့တော့ရနေတာပဲ တခြားထွက်မှ ဘာဖြစ်မယ်မသိဘူး။
7/15/2009 6:04 PM
စက္ကရီ ထေရီလို့ ပြောမိလို့လား...
ရေစစ္စရီ လို့ ခေါ်တယ်...
ဘိလပ်လိုတော့ register ဆိုလား ခေါ်သတဲ့...
ဟားဟား ဖတ်ပြီးရီလိုက်ရတာ.. အမကိုဟားတာမဟုတ်ဘူးနော် ရေးထားတာကောင်းလို့.
ဘိလပ်မြေလည်း လာချင်တယ်။ စကားလည်းမပြောတတ်ဘူး။ ငပျင်းကို သင်ပေးမယ့်လူလဲမရှိဘူး။ အမလို ဦးရီးတော် တစ်ယောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်။ သတင်းတွေတော့နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခုထိ မပီသေးပါ။:P
7/16/2009 2:28 AM
7/16/2009 4:14 AM
အမ ..ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး အရမ်းသဘောကျတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီ အခြေအနေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ နယ်မှာ တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် တော်လှပြီပေါ့။ အခုလဲ စလုံးမှာ နေတာ နှစ်ကြာတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ရနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတလော ကိုယ့်အသံထွက်ကို အားမရ ဖြစ်နေမိတယ်။ အမက တော်တော်လေး လုပ်ဖြစ်နေတာ ဆိုတော့ သိပ်မကြာခင် တိုးတက်လာမှာ သေချာပါတယ်။ ညီမကတော့ ဆန္ဒရှိပေမဲ့ ဒီလိုပါပဲ လိမ်ဖယ် လိမ်ဖယ် ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာက နေလို့ ရနေတာကို။ စိတ်လေတယ်။ ညီမ တော့ BBC က ဟာကို လိုက်နားထောင်ရင် ခနနဲ့ ပျင်းသွားတယ်။ ဆက်လုပ်လို့ မရဘူး။ အမ ပြောတဲ့ Tele Text ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးကို ပြောတာလဲ။ သတင်းမှာ ကြေညာတုန်း လိုက်ဖတ်တာ ပြောတာလားဟင်။
7/16/2009 7:29 AM
အင်း သိပ် ကံကောင်းတာပဲ။ အမှားကို မှားမှန်းလဲသိ၊ ပြင်လို့ ရတဲ့ နည်းလဲသိဆိုတော့။ တက်တက်စင် မှားနေတဲ့ အသံထွက်တွေကို ပြင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်နေသေးတဲ့သူတွေ တလှေကြီး တွေ့ နေရတာတော့ ရင်မောစရာ။
7/16/2009 9:52 AM
စုချစ်ရေ … မမေလဲ အစစအရာရာ သင်ပေးတဲ့ ဦးရီးတော်နဲ့ အတူနေရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ပျင်းနေတော့ ခက်တယ်။
မေ့သမီးလေး … အားပေးတာ ကျေးဇူးနော် … ။
ဆရာပေါ … အဖော်ရပြီဆိုပြီး အားတက်သွားတယ်။
ကိုပီတိရေ … ကျမတို့လို သူမသာ ကိုယ်မသာတွေ အများကြီး ထင်ပါရဲ့ … နော်။
ကိုလူထွေးကြီး … ကျမ သီလရှင်ဝတ်ရင် ရေစစ္စရီဘွဲ့ ပေးဦးမလို့လား .. :)
ရေတမာ ရေ … နှစ်ရှည်လများ နှုတ်ကျိုးပြီး စွဲလာခဲ့တဲ့ အစွဲက ဖျောက်ရခက်ပါဘိသနဲ့။ ရေတမာ ဘိလပ်မြေလာရင် … သဲတွေ ထုံးတွေပါ ယူခဲ့နော် :D
ရွက်လွှင့်ခြင်း … ကျမ ခပ်ပျင်းပျင်းနဲ့ပဲ ကြိုးစားနေပါတယ်။ တချိန်မှာ ဖြစ်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ။
အမည်မဲ့ ညီမရေ … Tele Text ဆိုတာက တီဗီမှာ သတင်းတွေကို စာအနေနဲ့ မြင်ရတာကို ပြောတာပါ။ အသံမပါဘူးလေ။ စာချည်း သက်သက်ပေါ့။ ကမ္ဘာ့သတင်း၊ ပြည်တွင်းသတင်း၊ စီးပွါးရေးသတင်း … စသဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တာ ရွေးပြီး ဖတ်လို့ရတယ်။ အဲဒီ သတင်းတွေဖတ်ပြီးမှ သူတို့ ကြေငြာတဲ့ သတင်းကို subtitle နဲ့ လိုက်ဖတ်ရင်း နားထောင် ရတာပါ။ အမလဲ ညီမလိုပဲ … ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆို မလုပ်ဖြစ်ဘူး အတင်းအကျပ် by force နဲ့ ခိုင်းမှ လုပ်ဖြစ်တာ။
7/16/2009 10:03 AM
me either for the pronunciation.;) Up2now, I can't understand their different accent totally. BTW, i like ur quote "I can but i won't " but, I should not be like that. :)
7/17/2009 12:00 AM
ဒီလိုပါပဲ မမေရယ် ...
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောတဲ့အခါ Native speaker တွေနဲ့ မသင်ခဲ့ရတော့ အသံထွက်က မှားမှာပါပဲ ...
အသံထွက်မှားရုံမက stress လုပ်ရမယ့်နေရာလဲ မှားကြတာပါပဲ .. ဘယ်ဘာသာစကားမဆို ဒီလိုပါပဲ
တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြင်ကြရုံပါပဲလေ ...
လူသိများတဲ့အမှားကတော့ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား "ပီလီ" ပေါ့ ... အဲဒီအသံထွက်အတိုင်း မေးကြည့်ပါ .. တခြားသူမဆိုထားနဲ့၊ ဘရာဇီးလ်တွေတောင် ဘယ်သူလဲ လို့ ပြန်မေးတာ ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
သူတို့ထွက်တဲ့အသံအမှန်က "ပယ်လေ" ပါတဲ့ (အနီးစပ်ဆုံး မြန်မာလို ရေးပြတာနော်)
နောက်တယောက်က "ရော်ဘတ်တိုဘက်ဂီယို" လေ ... တကယ့်အသံအမှန်က "ရိုဘာတိုဘာဂျီးယိုး" ပါတဲ့ (ဒါလဲ အနီးစပ်ဆုံးရေးပြတာနော်)
အင်္ဂလိပ်တွေက "အီတလီ" ကို "အစ်(တ်)လီ" တဲ့ .. It မှာ stress လုပ်ပါသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ Italian ကျပြန်တော့ အီတားလီယံ ဖြစ်သွားပြန်ရော ... စိတ်ကိုညစ်သွားတာပဲ ...
ဒါပေမဲ့ အင်္ဂလန်မှာတောင် ဒေသကွဲရင် အသံထွက်ကွဲသေးတာပဲနော် ... ဘယ်ဒေသက အသံထွက်ကို အမှန်လို့ ယူရမှာလဲ ... အကောင်းဆုံးကတော့ BBC တို့ဘာတို့ပြောနေတဲ့ Queen's English ကတော့ အမှန်ဆုံး စံ (standard) အသံထွက်ဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ ...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ... မသေမချင်းတော့ လေ့လာနေရဦးမှာပါပဲ ... ကိုယ့်စကားမဟုတ်တော့လဲ
မမေ အားကျဖို့ကောင်းတဲ့ဘ၀ပါဘဲ အမှန်ကိုသင်ပေးနိုင်တဲ့ ဦးလေးမျိူးရှိတာလဲ ကုသိုလ်တမျိုးပေါ့ အသံတွေ အမှန်ပြောရင်လဲ ဒီမှာကတော့ အမှားအကျင့်ပါနေပြီ အမှန်နဲ့ကတော့ ဝေးပြီးရင်းဝေရင်းပါ တတ်နိုင်သလောက် dictionary နားထောင်ပြီး လုပ်ပေးလဲ ကိုယ်ဘဲ ငပေါဖြစ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမှန်တွေဘယ်တော့များမှ သိမှလဲလို့ တွေးရင်း ရင်မောတယ် အမရယ် ဆရာမ မှားတာကို မထောက်ရဲလို့ ငြိမ်ခံနေရတာရယ် အားနာတတ်တဲ့ အကျင့်တွေရယ် သင်ပေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် အမှန်မသိတာရယ်နဲ့ လုံးခြာလည် ဂျာအေးသူ့မေရိုက် မှောင်မိုက်မှာ ငို ဆိုသလိုပါဘဲလေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဘဲမှန်အောင်ကျင့်ပြီးပြောပြန်တော့လဲ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က နားမလည် အဲဒီတော့ သူတို့နားလည်အောင် အမှားနဲ့ဘဲ ဆက်လက်ချီတက်ရမှာလား
9/03/2009 5:12 PM
အစ်မရေ ရတတ်သမျှလေး ဖတ်မှတ်သွားတယ်။ ဒီမှာပဲ ပြောချင်တာလေး ရေးခဲ့တတော့မယ် ။ အင်္ဂလိပ်စာ အကြောင်းပြောရင် မျက်ရည်ဘူး သီးလုံးလောက်ကျအောင် ထိုင်ထိုင်ပြီးငိုဖို့ ပဲ ရှိတော့တယ်။ အစ်မကံကောင်းလိုက်တာ ဦးရီးက ဘေးနားမှာရှိတော့။ ကျွန်တော်
တို့ က တော့အစ်မရယ် ဒီလိုပါပဲ ပြန့် ကျဲနေ တဲ့အထဲက မညီညွတ်မှုတွေပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုအရင်က ပတွတ် ပတွတ်ပြောပြောနေတာ ခုတော့ ပါးစပ် ကြီးပိတ်ထားရလို့ စိတ်ညစ်နေတယ် ။ အသံ ထွက် အကြောင်းကတော့ မှားလွန်းလွန်းလို့ မျက်နှာကြီးလည်း ထူးနေပါပြီ။ ရှက်ရမှန်းတောင် မသိချင်တော့ဘူး။ ဘဘကြီး ဦးခင်သန်းတော့ ဆုံးသွားပြီ အစ်မ သိလားမသိ ဘူး ....
9/09/2009 7:55 PM
မဖတ်ရသေးတဲ့ စာတွေ လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ဒီတစ်ပုဒ်မှာ တော့ သဘောကျလွန်းလို့ ကွန်မန့် ရေးခဲ့တယ် မမေရေ၊ 'ဘီအီး-ဘီအီး-နှစ်ပြောင်းပြန်-အေစီ' ဟုတ်လား၊း) အင်း.. မမေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသံထွက် မမှန်ဘူးသာ ပြောနေတာ..၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် ကောင်းတာကျ ထည့်မပြောဘူး၊း)
ဒီပို့စ်ဖတ်မိမှပဲ မမေ အင်္ဂလိပ်စကား ပြောတာကို နားထောင်ချင်မိ တော့တယ်၊ ဒီပို့စ်ရေးချိန်ကနေ တွက်ရင် အခုဆို ၂ နှစ်ခွဲလောက် ရှိသွားပြီ ဆိုတော့ ဦးရီးတော်လည်း ပြင်စရာ မလိုတော့ဘူး မဟုတ်လား..။
2/05/2012 8:51 PM